Izinqumo Ezi-5 Zokumaketha Ku-inthanethi Zonyaka wezi-2014 | Martech Zone
NgoMsombuluko, Januwari 27, 2014 NgeSonto, uJanuwari 26, 2014 UBrian Hoffman
Ukuqala konyaka omusha kuletha njalo nezinhlelo ezintsha zokumaketha, izabelomali kanye nenjabulo evuselelwe ngamathuba alindele noma yiliphi ibhizinisi. Uma uphethe ukumaketha enkampanini yakho, lokho okungenzeka kube namandla kakhulu. Ngenhlanhla, sineziphakamiso zokukusiza ukhulise umkhiqizo wakho nokulandela okuku-inthanethi ngo-2014. Nazi izinqumo ezinhlanu zokumaketha eziku-inthanethi okufanele uzenze namuhla:
1. Hlanganisa okuqukethwe kwakho Marketing
Bheka u-2014 ube ngomunye unyaka wezinkampani ukukhulisa ukumaketha kwazo. Ukususwa kwalesi sitatimende ukuthi abathengisi badinga isikhathi namathuluzi wokukhiqiza okuqukethwe okuhlukile ukuxoxa indaba eyenza inkampani ibe yinkampani. Kuzo zonke izinkampani ezincane okufanele zingenise indlela yazo yokuphakelwa kwezindaba zabathengi, kubalulekile ukuthi okuqukethwe kube nomsindo ohehayo. Amabhizinisi amakhulu anezinsizakusebenza zokushaya isigqi esiqinile ngokuhlala ekhipha okuqukethwe kaningi ngosuku. Lokho kusho, akubalulekile ukuhambisana noJones kuleyo metric kuphela ngoba yi-9% kuphela ye-B2B ne-7% yezinkampani ze-B2C ezicabanga ukuthi isu labo lokuqukethwe "lisebenza kakhulu." Ukuhlanganisa okuhlukile kokuqukethwe kuzoqinisekisa ukukhula okuzinzile kwezokuxhumana okulandelayo.
2. Yenza iselula ize kuqala
Ukulungiselela okuqukethwe okusetshenziselwa iselula kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili. Uma ubheka ukuthambekela okungaguquki kokuqanjwa kwamaselula ngo-2017 87% wawo wonke amadivayisi axhunyiwe kuzoba ama-smartphone namaphilisi. Into yokuqala ukuyikhipha ngesakhiwo amawebhusayithi aphendulayo ukuze ikhasi lewebhu lenzelwe ukubukwa kuyo yonke into. Okulandelayo kulayini isikhombimsebenzisi esibonakalayo esihlanzekile nesilula ukusiza ukugcina abantu ekhasini lakho. Abasebenzisi beselula balindele ukuthola izimpendulo ngokushesha futhi kalula ngoba bahlala besendleleni. Uma wenza ukuzulazula empendulweni yabo kube lula, bazobuya.
3. Sabalalisa Amaphiko Wakho Womphakathi
Ukuzama imithombo yezokuxhumana kuzobaluleka ngo-2014 manje njengoba lezi zinhlaka ezimbili, i-Twitter kanye ne-Facebook, "zikhokhela ukudlala" futhi okuthunyelwe kuzohlala kuphela ekuphakelweni kwezindaba okwemizuzu embalwa, uma kungenjalo imizuzwana. Thatha isikhathi sokuzama amanye amanethiwekhi afana nePinterest, Instagram kanye neTumbler. Zonke lezi zingosi zikhula ngejubane le-warp futhi unekhono lokuxhumana nabalandeli ngemikhankaso yokudala, enokwakheka. IGoogle Plus ngenye inethiwekhi ebekelwe ukuthuthukisa ukuma kwabo emhlabeni wezokuxhumana kulo nyaka. Ukuthola i-niche efanelekile kuGoogle Plus kungaba nzima, kepha izinzuzo zemiphumela ephezulu yenjini yokusesha zizohlala zisiza.
4. Yisho Ngezithombe
Amandla ezithombe namavidiyo ayamangaza kubathengisi abaku-inthanethi. Eqinisweni, iwebhu isusa konke ukunakekela kuzwe elibukwayo. Isibonelo, izithombe ku-Facebook zithola ukuthandwa okuningi, ukuphawula nokwabelana kunanoma iyiphi enye indlela yokuxhumana. Ngaphezu kwalokho, i-Google iguqule imiphumela yayo yokusesha ukukhuthaza izithombe ezingaphezulu kwemiphumela esuselwa embhalweni. Eqinisweni, abathengi abanothando lwe-eye-candy ebonakalayo kungenzeka ukuthi kungani uchofoze ukubuka le infographic.
Uma kukhona into eyodwa ezodonsa ukunaka kwabantu kulo nyaka, ngumyalezo olula. Musa ukucindezela okuqukethwe. Izinkampani ezenze lula isinqumo sokuthenga (okusho ukuthi zikhiphe imbiza yomkhakha) zazinamathuba angama-86% okuguqula amakhasimende.
Tags: Ukukhangisa OkuqukethweinfographicUkumakethwa Kwamaselula NethebulethiSocial Media Marketing
UBrian ungumxhumanisi wokukhangisa kwa I-Killer Infographics, ukuqala okusekwe eSeattle okugxile ekwakhiweni kwe-infographic, ihluzo ezinyakazayo, nemidwebo ehlangene I-Killer Infographics iyaziqhenya ngokuheha abanethalente abaphezulu abakwazi ukuletha amakhophi aphelele, i-one-of-a-kind data viz, inkambiso eyenziwe ngokwezifiso, kanye nokukhuthaza amasu. UBrian ukhulele ezintabeni zasePennsylvania naseVermont, futhi manje uchitha nsuku zonke uyakwazi ukuhamba eqhweni nokuhamba izintaba ePacific Northwest.
I-LinkedIn: Ochwepheshe Abaphezulu Bezenhlalo Abazolandela